Netherland oo 2-1 Kaga Badisay Brazil
Cayaartu waxay ahayd mid aad u kulul, waxaana markii hore gool dhaliska ku hormartay kooxda Brazil, balse waa laga daba yimid.
Ciyaartu waxay ku bilaabatay car car ay labada kooxood oo mid walba ay ku dooneysay inay gool kala hormarto mida kale, balse waxaa daqiiqadii 9aad gool lagaga naxsaday kooxda dalka Netherland. Brazil waxaa goolkaasi u saxiixay cayaaryahanka lambarka 11aad ee Robinho.
Ciyaarta ayaa markaas ka dib ka sii kululaatay, labada kooxoodna waxay kordhiyeen dardartooda oo weerar iyo weerar celis ayay ahayd. Balse waxay qeybtii hore ku idlaatay 1:0 oo Barazil ay ku horeysay.
Markii laysugu soo laabtay qeybtii labaad ee ciyaarta daqiiqadihii hore labada kooxood waxaa ka muuqatay taxadar iyo feejignaan. Hase yeeshee daqiiqadii 52aad Kooxda Netherland waxay la timid gool oo uu saxiixay cayaaryahankooda Sneijder. Goolkaasi bareejada ah ee kooxda Netherland la timid wuxuu kor u qaaday xamaasadii ay lahayd ciyaarta.
Cayaartoyda Brazil waxay u muuqatay inuu khalkhal ku dhacay, Netherland-na ay muujiyeen weerar culus taasoo mar kale u suurto gelisay in daqiiqadii 67aad ay gool kale la yimaadaan. Waxaana mar kale shabaqa Brazil ku hubsaday cayaaryahanka Sneijder.
Flibe Melo oo labarka 5aad ku ciyaara ee reer Brazil ayaa kaarka cas lasiiyay daqiiqadii 73aad.
Brazil waxay isku dayday inay bareejeyso kooxda kale, Netherlandna fursado badan ayay iska lumisay oo ay goolal kale ay kaga dhalin lahayd Brazil.
Hase yeeshee ciyaartu waxay ku dhammaatay 2-1 oo Netherland ay ku badisay.
Kaararka Casaanka iyo Huruuda
Qeybtii hore ee ciyaarta Brazil waxa hal ciyaartoy laga siiyay Kaarka Jaallaha, qeybtii dambena waxaa Kaarka cas la siiyay Kabtakooda Flibe Melo oo lambarka 5aad ku ciyaarayay.
Kooxda Netherlanda waxaa Kaarka Huruuda laga siiyay afar ciyaartoy.
Qeybtii koowaad hal ciyaartoy ayaa laga siiyay, qeybtii labaadna saddex ciyaartoy ayaa laga siiyay kaarka Huruuda.
Ciyaaraha Adduunka ee Koonfur Afrika